Famongorana ny fanendahana :: Telo amby roapolo lahy nosamborina teny Antaninarenina • AoRaha
Nentina teny amin’ny biraon’ny polisy ireo lehilahy telo amby roapolo nihazakazaka maraina teny amin’ny faritra Antaninarenina, tamin’ny marainan’ny alahady lasa teo. Ahiahiana ho mpanendaka sy mpanao fandrobana eny amin’ iny faritra iny ireto andiandehilahy ireto. Natao fanadihadiana izy ireo ary nalefa nody, ny hariva.
Maro ny fitarainana voaray avy amin’ny mponina, eny Ambohijatovo sy Faravohitra, noho ny fisian’ny fanendahana ataon’ny olona toy ireny mpihazakazaka maraina ireny, raha ny tatitry ny mpitandro filaminana. Tena lasibatra ihany koa ny olona mpandeha taksibe amin’ny maraina.
Nampiahiahy, hoy ireo polisy, ireto lehilahy maromaro nosamborina, nanomboka tamin’ny 4 ora maraina tamin’ny alahady lasa teo, ka nentina natao famotorana. «Avy amina toerana lavidavitra, toy ny eny Ambohimanarina, Anjanahary, Ankatso sy Andavamamba izy telo amby roapolo lahy ireo no tonga teny Antaninarenina. Misy tsy mbola ampy taona amin’izy ireo. Milaza fa manao fanatanjahantena no ahatongavan’izy ireo eny fa tsy hanendaka. Nalefa nody izy ireo ary hantsoina raha misy ny mety hilàna azy », hoy ny polisy ao amin’ny Kaomisarian’ny polisy etsy Analakely.
Halatr’omby :: Dahalo telo maty voatifitra tany Ambovombe
Fivezivezena any Toamasina :: Olona am-polony tra-tehaky ny Tafika tany Pangalana